Sebenza ukufakwa sangasese endlini wiring, kusobala, kubonakala sengathi kakhulu ngokomthetho inselele futhi kuyakhandla msebenzi. Lokhu kungenxa isidingo mkhosi esiqinile yamazinga izindlela zokukhiqiza mayelana izakhi ukuphepha kanye izinto. Ukuzibhala ukukhanda kanye ukufakwa umsebenzi phezu electrocommunications wendawo noma emikhulu kabusha kuleli cala nje ngaphandle, kumele amenywe ngogesi abanekhono.
Bawabulale elikhulu izingozi ezingaba ukuhlela efanele imisebenzi kukagesi iphuzu elibaluleke kakhulu - Mayelana nezidingo zokuphepha ezivamile. Lokhu kusho ukusebenzisa ingozi yomlilo, izintambo kagesi nazo zonke izinto ezizungezile noma ukuhlukumezeka ngokomzimba.
Yikuphi izimbangela indlela kukhona ukusebenza yehlukene kaningi okubalwa futhi iphephile yenqubo uxhumano? Izintambo zikagesi ezisobala olungavikelekile aboshelwe izimbotshana emaceleni, kanye nemikhakha ekhethekile, ikakhulukazi plastic, usabalalisa uxhumano iyatholakala ngokwenjongo zabo kanye nosayizi. Ukuze kwenziwe ukulungisa okuhleliwe ekhelini kanye yokuxhuma amabhlogo, ukushintshwa nezinyawo kufanele, ngenxa yezizathu eziphathekayo, izotholakala.
Lapha kubalulekile ukuba nithole isidingo yesibili Ukuvikelwa ukwahlukanisa ngesisekelo impahla non-ezivuthayo, beka lapho wiring ongaphandle ahanjiswa kumzila emkhakheni bekhaya ethandwa imililo. Asbhestosi amashidi, isibonelo, ukuvikela wadalula izintambo zikagesi iseduze kobuso izinhlelo bafudumale ipayipi. Izintambo zikagesi ezisobala Universal ngaphansi usimende kufanele ibekwe ngaphansi kwezimo ngenhla kuhambisana impindamqondo esiphezulu wabuka egumbini.
Kususelwa ukufakwa ayehilela ukuthola ukuxhumana iziteshi kufanele abe amazinga ngokufanele isikhathi eside. Splitters, nezinyawo, izintambo njalo kudingeka ukuthi kutsho zero isici, futhi udinga ukufaka ukushintsha mechanical ukuthi ahlinzeke ukuvala shaqa ezizimele e zikagesi, lapho Inani lamanje amandla kakhulu. It is Ukhumbula ukuthi ngo zokuxhumana befikile i ukufakwa izintambo eyenziwa emabhokisini abafanele. Kuyaphawuleka ukuthi phakathi nokufaka ugesi kumele zibukeke ukugqamisa iphuzu ukusatshalaliswa ezishaywayo umugqa. Ngakho ukuqeda izinkinga kungenzeka ezingavela esikhathini esizayo lapho imishini noma ukusebenza ngezipikili.
Ukwaziswa Kabanzi on the izindlela zokuxhumana kanye kagesi ukufakwa ubuchwepheshe ekhaya noma ifulethi Sokubambisana ingatholakala engosini ethi ingosi thematic - http://electrovolts.ru.
Chernoburaya impungushe: izithombe, incazelo. Chernoburaya impungushe ngokwemvelo futhi ekhaya